Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေများ - KY ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်
Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်နှင့်လိုင်စင်များ ဖြစ်နိုင်သည် 2021 ဘို့လာမယ့်ကြသည်!
၂၀၂၀ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကီတာကီသည်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်မှုကိုမဲပေးပြီးအတည်ပြုခဲ့သည်။ Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေများသည်မကြာမီပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကကင်တပ်ကီပြည်သူလူထုအတွက်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်မဲ ၆၅ မှ ၃၀ အထိမဲပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မကြာမီဥပဒေဖြစ်လာပြီးလူနာများအားဥပဒေရေးရာဆေးခြောက်ဆေးဝါးနှင့်အခြားလူများအားတားမြစ်ထားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောမလိုအပ်သောဖမ်းဆီးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကီဆေးခြောက်ဘီလ် HB 136
ကင်တပ်ကီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေများသည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမကြာမီမှာပင်ကင်တပ်ကီသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူနာများအတွက်ဆေးခြောက်တရားဝင်နိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်းလာနိုင်သည်။ မကြာခင်မှာပဲသင်ရနိုင်သည် Kentucky တွင်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရန်လိုင်စင်.
ကီတီကီသည် ၂၀၂၁ တွင်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ရန်လိုအပ်နေသေးသည်
Kentucky ကိုရှာဖွေနေသည် ဆေးခန်းဆိုင်ရာအချက်အလက် - ဤတွင်နှိပ်ပါ။
Kentucky HB 136:အမျိုးမျိုးသောအသစ်ဖန်တီးပါ ကင်တပ်ကီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေများ to သတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်; ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်အစီအစဉ်အား Kentucky ဥပဒေရှိပြprovisions္ဌာန်းချက်များမှဆန့်ကျင်။ ကင်းလွတ်စေရန်၊ Kentucky ရှိဆေးခြောက်ဆေးဝါးအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရက်ယမကာနှင့်ဆေးခြောက်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနအားလိုအပ်သည်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဌာနကိုအရက်ယမကာနှင့်ဆေးခြောက်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနအတွင်းတည်ထောင်ရန်၊ လူနာများကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်း၊ လူနာများထံလည်ပတ်ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောစောင့်ရှောက်သူများအားဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကန့်သတ်ရန်။ ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်အချို့သောကာကွယ်မှုတည်ထောင်ရန်; ယောဂီများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာကွယ်မှုထူထောင်ရန်, ပြည်နယ်လိုင်စင်ဘုတ်အဖွဲ့များကဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအတွက်စာဖြင့်ရေးသားလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန်အတွက်လေ့ကျင့်သူများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်ကျွန်ုပ်အားပေးရန်၊ ရှေ့နေများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာကွယ်မှုထူထောင်ရန်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ကိုကျောင်းဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်၊ မူကြိုကျောင်း၊ မူလတန်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်းကျောင်းများရှိအမှားပြင်ဆင်ချက်များ၊ Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်မှု၊ ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလည်ပတ်နေစဉ်တားဆီးရန်၊ ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုတားမြစ်ရန်၊ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး မှဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်အလုပ်ရှင်အားခွင့်ပြုရန်၊
မှတ်ပုံတင်မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားလိုအပ်ချက်များချမှတ်ရန်၊ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားကောက်ခံခြင်း၊ ဌာနအနေဖြင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးငွေကိုလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားလျှောက်ထားမှုကိုဌာနအနေဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ငြင်းပယ်နိုင်သည်ကိုသတ်မှတ်ရန်၊ ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်အချို့သောတာဝန်ဝတ္တရားကိုထူထောင်ရန်, မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်ကိုသတ်မှတ်ရန်၊
တစ် ဦး ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်ကျောင်းအုပ်ကြီးအရာရှိဖြစ်ခြင်းမှ Practitioner တားမြစ်သည်; ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအပြန်အလှန်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတားမြစ်ရန်၊ နှင့်
ကီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေများ - ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကင်တပ်ကီပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီသည်ဆေးခြောက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ HB 136, ပြည်နယ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောထောက်ခံမှုရှိပြီး, ဥပဒေဖြစ်လာဖို့ကောင်းတစ် ဦး အခွင့်အလမ်းရပ်တည်။ မကြာသေးမီကအောက်လွှတ်တော်ကော်မတီမှထုတ်ပြန်ခဲ့သောမူကွဲသည်ရပ်တည်နေသည် 116 စာမကျြနှာ, ။ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်၎င်းသည်စာမျက်နှာ ၆၀၀ ခန့်ရှိသော Illinois ဆေးခြောက်နှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေထက်များစွာတိုတောင်းသည်။
HB 136 သည်လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးသည် “ ဆေးခြောက်လုပ်ငန်း” အစားဆေးခြောက် "ကိုဆေးခြောက်" ကိုရည်ညွှန်းပြည်နယ်များ၏လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း "ဆေးခြောက်။ " ဥပဒေကြမ်းသည်လိုင်စင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုများစွာသောအနာဂတ်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများသို့ချန်ထားခဲ့သည်၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိဆေးခြောက်လိုင်စင်အတွက်“ အရေးပေါ်” စည်းမျဉ်းများ၏စာမျက်နှာ ၂၀၀ ခန့်နှင့်ဆင်တူနိုင်သည်။
ပြည့်စုံသောလိုင်စင်ချထားပေးမှုအစီအစဉ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအခကြေးငွေများနှင့်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ Kentucky Medical Cannabis Laws အရဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ငါးမျိုးကိုဖန်တီးပေးသည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အမျိုးမျိုးအတွက်ထိပ်တန်းလိုအပ်ချက်အချို့ကိုလေ့လာသည်။
Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ MARIJUANA ဥပဒေစာသားနှင့် PDF (HB ၁၃၆)
Kentucky MARIJUANA ယဉ်ကျေးမှုလိုင်စင်
“ စိုက်ပျိုးသူ” ဆိုသည်မှာဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရသည့်အဖွဲ့ကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည်စက်ရုံကုန်ကြမ်းများကိုထွန်ယက်စိုက်ပျိုး၊ ရိတ်သိမ်းသည်၊ အခြားစိုက်ပျိုးသူ၊ ဆေးခန်း၊ ပရိုဆက်ဆာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊
စိုက်ပျိုးသူများသည်ကုန်ကြမ်းများကြီးထွားရန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ပုဒ်မ ၂၁ သည်သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအောက်ပါအတိုင်းကန့်သတ်သည် -
ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များ၊ ပျိုးပင်များ၊ အပင်များသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုရယူခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုဤပြည်နယ်ရှိအခြားလိုင်စင်ရဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ပို့ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးသူများသည်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ကွဲပြားသော“ အလွှာများ” ရှိသောတစ်ခုတည်းသောလိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ ဤသည်သည်အခြားဥပဒေရေးရာပြည်နယ်များရှိအခြားဆေးခြောက်လိုင်စင်နှင့်တူ၏။ ၄ င်းတို့၏စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်အရွယ်အစားပေါ် အခြေခံ၍ Tier I, Tier II, Tier II နှင့် Tier IV စိုက်ပျိုးသူများရှိသည်:
အလွှာ ၁ စိုက်ပျိုးသူ - စတုရန်းပေ ၂,၅၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော၊
အလွှာ - ၁၀၀၀၀ စတုရန်းပေဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း၊
အလွှာ III- 25,000 စတုရန်းပေသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း;
အလွှာ IV- ၅၀၀၀၀ စတုရန်းပေသို့မဟုတ်ထို့ထက်နည်းသည်။
ပြည်နယ်အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည် အနည်းဆုံး ဥပဒေကြမ်းစတင်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းလယ်သမားလိုင်စင် ၁၅ ခုရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စိုက်ပျိုးသူများ (ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကဲ့သို့) သည်လက်ခံရမည် လေးနက်သော အခွန်။ ပုဒ်မ ၃၃ သည်ယစ်မျိုးခွန်ကောက်ခံသည် စုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများအပေါ် 12% တစ် ဦး လယ်သမား၏။
Kentucky ဆေးခြောက် ဆေးခန်းလိုင်စင်
ဥပဒေကြမ်းတွင်အောက်ပါအတိုင်း“ ဆေးခန်း” ကိုသတ်မှတ်သည်။
“ ဆေးခန်း” ဆိုသည်မှာဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်၊ ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများထံမှဆေးခြောက် ၁၆ စီးကိုဝယ်ယူခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်း၊
ဆေးခန်းလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းသည်တောင်သူများအားလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းထက်အနည်းငယ် ပို၍ ရှင်းလင်းသည်။ ဆေးရုံဆေးခန်းများနှင့်တွဲဖက်ရန်ဥပဒေကြမ်းတွင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်။ ပုဒ်မ ၂၂ တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ -
ဆေးခန်း ၁၀ ခုသည်ဆေးရုံဆေးခန်း ၁၂ ခုနှင့်ပူးပေါင်းရန်သဘောတူညီချက် ၁၀ ခုကိုအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတည်ထောင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
ပြည်နယ်အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည် အနည်းဆုံး ဥပဒေကြမ်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးတစ်နှစ်အတွင်းဆေးခန်း ၂ ခုခွဲတမ်းခွဲထားရမည်။ တည်ထောင်ထားသော“ ဖွံ့ဖြိုးရေးခရိုင်” တစ်ခုချင်းစီအတွက်အနည်းဆုံးဆေးခန်းတစ်ခန်းကိုအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်ကတော့သူတို့ပြည်နယ်ကိုလွှမ်းခြုံဖို့ပထဝီဝင်အနေအထားအရစွန့်ပစ်ရမယ်။
ဥပဒေကြမ်းတွင်အောက်ပါအတိုင်း“ ပရိုဆက်ဆာ” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
“ ထုတ်လုပ်သူ” ဆိုသည်မှာဤအခန်းတွင်လိုင်စင်ယူထားသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမှထုတ်ယူသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ ခြယ်လှယ်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့) အခြားနည်းစနစ်များကိုပြုပြင်ရန်အတွက်စက်ရုံမှကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်များ၊ လိုင်စင်ရဆေးခန်းမှရောင်းချရန်။ "
ပရိုဆက်ဆာများကိုပုဒ်မ ၂၃ တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအချို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(က) ဤပြည်နယ်ရှိစိုက်ပျိုးသူ၊ ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများမှစက်ရုံကုန်ကြမ်းများကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူခြင်း၊
ဆေးဝါးဆေးခြောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကြိုးကိုင်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊
(ဂ) ဤပြည်နယ်ရှိဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ဆေးခြောက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
ဥပဒေကြမ်းအရအနည်းဆုံးပရိုဆက်ဆာငါး (၅) ခုကိုဖြတ်သန်းပြီးတစ်နှစ်အတွင်းလိုင်စင်ချပေးသည်။ ပရိုဆက်ဆာများသည်လယ်သမားများနှင့်အတူတူပင်စုစုပေါင်းရငွေ ၁၂% ခွန်ကောက်ခံသည့်အခွန်ကိုကောက်ခံသည်။
ဤဥပဒေကြမ်းသည်“ ထုတ်လုပ်သူများ” အတွက်လိုင်စင်ကိုဖန်တီးပေးပြီး၊ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့ကိုပုဒ်မ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသည် -
“ ထုတ်လုပ်သူ” ဆိုသည်မှာဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရထားသောအဖွဲ့ကို (၁၇) လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးလယ်သမားတစ် ဦး နှင့်ပရိုဆက်ဆာ ၁၈ လုံးပါခွင့်ပြုထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုသည်။
ပုဒ်မ ၂၄ အရထုတ်လုပ်သူများအား -
(က) ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များ၊ ပျိုးပင်များ၊ အပင်များသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုရယူခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊
(ခ) ဤပြည်နယ်ရှိအခြားလိုင်စင်ရဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊
()) ဤပြည်နယ်ရှိစိုက်ပျိုးသူထံမှကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
အကျိုးသက်ရောက်သည့်ဥပဒေကြမ်းတစ်နှစ်အတွင်းပြည်နယ်သည်အနည်းဆုံးထုတ်လုပ်သူလိုင်စင် (၃) ခုထုတ်ပေးရမည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည်လည်းယစ်မျိုးခွန်ဖြစ်သည်။
KENTUCKY MARIJUANA လုံခြုံမှုဆိုင်ရာလိုက်နာမှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်
ဥပဒေအရလိုင်စင်ရထားသောဆေးခြောက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုနှစ်ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
(က) ဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်သောဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
ပုဒ်မ ၂၅ အရအောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကိုခွင့်ပြုထားသည် -
(၁) ဤပြည်နယ်ရှိကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများသို့မဟုတ်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၂၆ ခုမှရရှိသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ကိုရယူခြင်းသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊
(၅) ဆေးခြောက်ဆေးဝါးများ မှလွဲ၍ ဆေးခြောက်နှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအ ၀ င်ဆေးခြောက်စက်ပစ္စည်းများနှင့်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများကအသုံးပြုသောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၊
(၆) ဤပြည်နယ်တွင်ထုတ်လုပ်သောဆေးခြောက်ဆေးဝါးများ၊ ဆေးခြောက်ပါဝင်မှု၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ မှိုများ၊ ညစ်ညမ်းမှုများ၊ ဗီတာမင်အီးအက်တိတ်နှင့်အခြားတားမြစ်ထားသောဆေးဝါးများအပါအ ၀ င်စစ်ဆေးခြင်း၊
(၇) ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်း။ သင်တန်းတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်နိုင်သည် -
(က) ဆေးခြောက်ဆေးခြောက်ကိုလုံခြုံစွာထိရောက်စွာစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
(ခ) လုံခြုံရေးနှင့်စာရင်းတာဝန်ခံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နှင့်
(ဂ) ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနှင့်ဆေးသုတေသနဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များ၊
(8) ဤအပိုင်းကိုအောက်မှာခွင့်ပြုလုပ်ရပ်များများအတွက်လျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိ; နှင့်
(၉) ဥပဒေအရတားမြစ်ထားသောသို့မဟုတ်တားမြစ်ထားသောအခြားဆေးခြောက်မဟုတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း။
လိုင်စင်ရထုတ်လုပ်သူသည်တစ်နေရာ (၁) ခုနှင့် (၁) ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတစ်ရုံကိုသာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အကယ်၍ စုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများသည်ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀,၀၀၀ အောက်ဖြစ်လျှင်၊ အခကြေးငွေသည်စုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏ + ၁% ဖြစ်သည်၊
စုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ $ 2,000,000 နှင့် $ 8,000,000 အကြားလျှင်, အခကြေးငွေစုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ + $ 1.5 ၏ 2,000% ဖြစ်၏
အကယ်၍ စုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများသည်ဒေါ်လာ ၈၀၀၀,၀၀၀ ထက်ပိုပါက၊ စုစုပေါင်းလက်ခံငွေ၏ ၂% + ၄ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ လွန်ခဲ့သောနှစ်ကဒေါ်လာ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ထက်နည်းသောစုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများဖြစ်ပါကအခကြေးငွေမှာဒေါ်လာ ၅၀၀ နှင့်စုစုပေါင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏ ၁% ဖြစ်သည်။
ဌာနသည်လိုင်စင်ကိုငြင်းပယ်နိုင်သည် အကြောင်းပြချက် “ အသံသမ္မာသတိကိုကျင့်သုံးခြင်း” တွင်ပါဝင်သည် -
ကျောင်းအုပ်တစ် ဦး အားပြစ်မှုကျူးလွန်သောပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်ကြောင်း၊
KENTUCKY MARIJUANA တရားဝင်၏အနာဂတ်အတွက် Outlook
Frankfort ရှိဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်၎င်း၏နည်းလမ်းအတိုင်းအလုပ်လုပ်သည်နှင့်အမျှဥပဒေကြမ်းသည်သေချာပေါက်ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင် HB 136 သည်အခြားပြည်နယ်များရှိဆေးဝါးကုသမှုများနှင့်တော်တော်ဆင်တူသည်။ လျှောက်လွှာအပြည့်အစုံအတွက်ပြည်နယ်မှစည်းမျဉ်းများထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရာဘာသည်အမှန်တကယ်ထိမှန်မည်ဖြစ်သည်။ ကင်တပ်ကီသည်ဆေးခြောက်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုနောက်ဆုံးတွင်လက်ခံနိုင်သည့်အခြားပြည်နယ်များနှင့်ပူးပေါင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁ မှ ၃၀ ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ နောက်ခံအခြေအနေမှမလိုအပ်ပါက -
၆ (၁)“ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူလူနာနှင့်ဆက်ဆံမှု” ဆိုသည်မှာကုသခြင်းသို့မဟုတ်အကြံပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်
7 ဆက်ဆံရေး, အရာ၏သင်တန်းကာလအတွင်း Practitioner:
8 (က) ကန ဦး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမေးပွဲနှင့်အကဲဖြတ်ပြီးစီးခဲ့သည်
10 (ခ) ဖြစ်နိုင်သည့်ကုထုံးနှင့်စပ်လျဉ်း။ လူနာနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့သည်
ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်၏ 11 palliative ဂုဏ်သတ္တိများ;
12 (c) လူနာနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလူနာအားအသိပေးခဲ့သည်
13 အကြားဖြစ်နိုင်သမျှ interaction ကအပါအဝင်ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်၏အသုံးပြုမှု ကီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်
15 ထိုအချိန်ကယူပြီး; နှင့်
16 ()) သူသို့မဟုတ်သူမနောက်ဆက်တွဲစောင့်ရှောက်မှုပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားတော်မူပြီနှင့်
လူနာအား 17 ကုသမှု;
၁၈ (၂)“ ဆေးခြောက်လုပ်ငန်း” ဆိုသည်မှာစိုက်ပျိုးသူ၊ ဆေးခန်း၊ ပရိုဆက်ဆာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊
၁၉ ဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင် ၁၉ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ
၂၀ (၃)“ ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်” ဆိုသည်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးအရာရှိ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ ၀ န်ထမ်းကိုဆိုသည်။
၂၂ (၄) ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူဆိုသည်မှာ -
၂၃ (က) မှတ်ပုံတင်ထားသောအရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာ၊
တရားဝင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ရယူခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်သောလူနာ ၂၄ ယောက်
၂၆ (ခ) တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသူတစ် ဦး ထံလာရောက်လည်ပတ်သောအရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာ
UNOFFICIAL COPY 20 RS HB 136 / GA စာမျက်နှာ ၂၈ မှ ၁၁၈ HB2 - 118 - Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်ခြင်း
၁ အခြားပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ နယ်မြေ၊ ဓနသဟာယ၊
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲရန်လူသုံး ဦး ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်
၅ (၅)“ စိုက်ပျိုးသူ” ဆိုသည်မှာဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရသည့်အဖွဲ့ကိုဆိုလိုသည်။
၆ နှင့်စက်ရုံကုန်ကြမ်းများကိုအခြားစိုက်ပျိုးသူ၊ ဆေးခန်း၊
7 ထုတ်လုပ်သူ, ဒါမှမဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလိုက်နာမှုစက်ရုံ;
၈ (၆)“ စိုက်ပျိုးသူအကျိုးဆောင်” ဆိုသည်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးအရာရှိ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ ၀ န်ထမ်းကိုဆိုသည်။
9 စေတနာ့ဝန်ထမ်း, ဒါမှမဟုတ်လယ်သမားတစ် ဦး ၏အေးဂျင့်;
၁၀ (၇)“ ဌာန” ဆိုသည်မှာ KRS တွင်တည်ထောင်သည့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာနကိုဆိုသည်
၁၂ (၈)“ သတ်မှတ်ထားသောစောင့်ရှောက်သူ” ဆိုသည်မှာမှတ်ပုံတင်ထားသောသူကိုဆိုသည်
13 ဤအခန်းအားဖြင့်လိုအပ်အဖြစ် XNUMX ဌာန,
၁၄ (၉)“ ဆေးခန်း” ဆိုသည်မှာဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်။
ဆေးဝါးများသည်ပိုင်ဆိုင်သည်၊ ပို့လွှတ်သည်၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊
ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ ၁၆ ဆေးခြောက်၊
၁၇ (၁၀)“ ဆေးရုံကိုယ်စားလှယ်” ဆိုသည်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးအရာရှိ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ ၀ န်ထမ်းကိုဆိုသည်။
18 စေတနာ့ဝန်ထမ်း, ဒါမှမဟုတ်ဆေးခန်း၏အေးဂျင့်;
၁၉ (၁၁)“ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမပြုပါ” ကိုဆိုလိုသည် -
၂၀ (က) ထိုသူအားအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သောပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း
21 KRS 439.3401; ဒါမှမဟုတ်
22 (ခ) ခွဲခြားထားသည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ဒရယ်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်း
ထိုသူအားပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်ပြစ်မှုအဖြစ် ၂၃ ခု မှလွဲ၍၊
၂၄။ အစမ်းခန့်သက်တမ်းအပါအ ၀ င်ပြစ်မှုအတွက်၊
ထောင်ဒဏ် (သို့မဟုတ်) ကြီးကြပ်ရေးမှလွှတ်ပေးခြင်းသည်ငါး (၅) နှင့်အထက်အပြီးသတ်ခဲ့သည်
၂၆ နှစ်အစောပိုင်း၊ သို့မဟုတ် ၂၇။ ဤပုဒ်မ ၁ မှ ၃၀ အရအပြုအမူများပါ ၀ င်သောပြစ်မှုတစ်ခု
Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေများ - နောက်စာမျက်နှာတွင်ထပ်မံရှိသည်
ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁ မှ ၃၀ မပြprior္ဌာန်းမီကဖြစ်ပွားခဲ့သည်
၅ (၁၂)“ ပိတ်ထားသောသော့ခတ်ထားသောအဆောက်အ ဦ” သည်အခန်းကဲ့သို့သောမိုးလုံလေလုံကြီးထွားလာသောနေရာတစ်ခုကိုဆိုသည်။
ဖန်လုံအိမ်၊ အဆောက်အ ဦး သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားသောအခြားမိုးလုံလေလုံenclရိယာများ
7 စိုက်ပျိုးသူသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူမှလည်ပတ်။ သော့ခလောက်များနှင့်အခြားလုံခြုံရေးတပ်ဆင်ထားသည်
စိုက်ပျိုးသူသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်များမှသာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည့်စက်ပစ္စည်း ၈ ခု
၁၀ (၁၃)“ စုစုပေါင်းငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ” ဆိုသည်မှာငွေ၊ ချေးငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အခြားငွေများအားလုံးကိုလက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်
ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြင့်မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုငွေ ၁၁ တန်၊
၁၂ (၁၄)“ ကြီးထွားမှု ”ရိယာ” သည်ပိတ်ထားသောသော့ခတ်ထားသောစက်ရုံနှင့်တူညီသည်။
13 (15) "ဆေးခြောက်" KRS 218A.010 အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအတူတူပင်ကိုဆိုလိုသည်;
14 (16)“ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်” သည် KRS 218A.010 တွင်သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဆေးခြောက်ကိုဆိုလိုသည်
ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊
16 အက်ဥပဒေပုဒ်မ 1 မှ 30 အရရောင်းချ, ပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်အသုံးပြု။ ဝေါဟာရ
၁၇“ ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်” တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ကြမ်းပင် ၁၈ ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
၁၉ (၁၇)“ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ” ဆိုသည်မှာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊
ကဏ္ medicinal ၁ နှင့်အညီဆေးခြောက်ကိုသိုလှောင်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်စားသုံးခြင်း
ဤအက်ဥပဒေ၏ 22 မှ 30;
၂၃ (၁၈) -“ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်” ဆိုသည်မှာမည်သည့်ဒြပ်ပေါင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊
24 အနီရောင်, အရောအနှော, ဒါမှမဟုတ်အပင်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်း၏ပြင်ဆင်မှု, Cannabis sp ။ , ၎င်း၏အစေ့
25 သို့မဟုတ်၎င်း၏ဗဓေလသစ်; သို့မဟုတ်မည်သည့်ဒြပ်ပေါင်းများ, အရောအနှော, သို့မဟုတ်မဆိုပါရှိသည်သောပြင်ဆင်မှု
စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သည့်အခါဤအရာဝတ္ထု ၂၆ ခု၊
27 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, dispens, ဖြန့်ဝေ, ရောင်းချ, သိမ်းယူသို့မဟုတ်အညီအသုံးပြုသည်
UNBOFFICIAL COPY 20 HB136 of RS HB4/ GA စာမျက်နှာ ၄ ​​မှစာမျက်နှာ ၄ ​​- Kentucky ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်ခြင်း
ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁ မှ ၃၀၊
၂ (၁၉)“ မိုင်းနား” ဆိုသည်မှာအသက် (၁၈) နှစ်မပြည့်သေးသူကိုဆိုသည်။
၃ (၂၀)“ ဆေးဝါးပညာ” ဆိုသည်မှာ KRS ၃၁၅.၀၁၀ နှင့်တူညီသည်။
၄ (၂၁)“ လေ့ကျင့်သူ” ဆိုသည်မှာထိန်းချုပ်ရန်ညွှန်ကြားရန်ခွင့်ပြုထားသောဆရာဝန်ကိုဆိုလိုသည်
KRS5အောက်ရှိတ္ထုများ (၅) သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ထားသောမှတ်ပုံတင်သူနာပြုတစ် ဦး ဖြစ်သည်
6 KRS 314.042 အောက်တွင်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်
8 ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၊5(9) "ပရိုဆက်ဆာ" ဤအခနျးအောက်မှာလိုင်စင်ရကုန်ကြမ်းစက်ရုံရရှိသွားတဲ့တစ်ခု entity ကိုဆိုလိုသည်
ပြင်ဆင်ရန်၊ ချုံ့ရန်၊ ခြယ်လှယ်ရန်၊ ပေါင်းစပ်ရန်အတွက်စိုက်ပျိုးသူမှပစ္စည်း ၁၀ ခု၊
11 စက်ရုံကုန်ကြမ်းများထုတ်လုပ်ရန် (သို့) အခြားနည်းဖြင့်ပြုပြင်ရန်
ဆေးခန်း ၁၃ ခု၊ ၁၄ (၂၃)“ Processor agent” ဆိုသည်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးအရာရှိ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ ၀ န်ထမ်းကိုဆိုသည်။
15 စေတနာ့ဝန်ထမ်း, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး ပရိုဆက်ဆာ၏အေးဂျင့်;
၁၆ (၂၄)“ ထုတ်လုပ်သူ” ဆိုသည်မှာခွင့်ပြုထားသည့်ဤအခန်းအောက်ရှိလိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်
တောင်သူလယ်သမားနှစ် ဦး စလုံး၏ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်၊
18 ပရိုဆက်ဆာ; ၁၉ (၂၅)“ ထုတ်လုပ်သူကိုယ်စားလှယ်” ဆိုသည်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးအရာရှိ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ ၀ န်ထမ်း၊
၂၁ (၂၆)“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာ” ဆိုသည်မှာစာဖြင့်ရေးသားထားသောလက်မှတ်ရရှိထားသူကိုဆိုသည်
၂၂ သူသို့မဟုတ်သူမသည်စစ်မှန်သောလက်တွေ့ - လူနာ ၂၃ ဆက်ဆံရေးရှိသည့်လေ့ကျင့်သူ၊
၂၄ (၂၇)“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောကျန်းမာရေးအခြေအနေ” ဆိုသည်မှာရောဂါသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေကိုဆိုလိုသည်
25 ဆရာဝန်တစ် ဦး အဘို့အလိုငှါအရည်အချင်းပြည့်မီသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများစာရင်းတွင်ပေါ်လာသည်
ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ နှင့် ၂၈ အရအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အညီ ၂၇ နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်
20 HB136 -5၏ UNOFFICIAL COPY 118 RS HB 013610.100 / GA စာမျက်နှာ 366 - XXXX GA
1 အောက်မှာပြဌာန်း XNUMX စည်းမျဉ်းများ,
၂ (၂၈)“ ကုန်ကြမ်းစက်ရုံ” သည်အမျိုးသမီးအပင်၏ trichome ဖုံးလွှမ်းထားသောအစိတ်အပိုင်းကိုဆိုလိုသည်
3 ဆေးခြောက် SP ။ အရွက်များ၊ အပင်များ၊ အစေ့များနှင့်ပန်းများကိုရောစပ်ခြင်း
4 ဆေးခြောက် SP ။ အပင်၊ ၅ (၂၉)“ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား” ဆိုသည်မှာဌာနမှထုတ်ပေးသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်
၇ စောင့်ရှောက်သူ၊ ၈ (၃၀)“ မှတ်ပုံတင်ထားသောအရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာ” ဆိုသည်မှာလျှောက်ထားသောအရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာဆိုသည်။
ဌာနမှထုတ်ပေးသောလိုင်စင်ထုတ်ပေးငွေ ၁၀ ။
11 (31) "လုံခြုံရေးလိုက်နာမှုစက်ရုံ" ဤအခန်းအောက်မှာလိုင်စင်ရသည့် entity ကိုဆိုလိုသည်
၁၂ တွင်အောက်ပါ ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းဆုံးတစ်ခု (၁) ကိုထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
13 (က) အောက်တွင်လိုင်စင်ရဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်စမ်းသပ်ခြင်း
14 ဤအခနျး၊ သို့မဟုတ် ၁၅ (ခ) ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များကိုသင်တန်းပေးခြင်း၊
၁၆ (၃၂)“ လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအေးဂျင့်” ဆိုသည်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးအရာရှိ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကိုဆိုသည်။
17 အလုပ်သမား၊ စေတနာ့ ၀ န်ထမ်း၊ သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးလိုက်နာမှုရှိသည့်စက်ရုံ၏အေးဂျင့်၊
၁၈ (၃၃)“ ပျိုးပင်” သည်ပန်းများမရှိသောရှစ်ရှစ်ပင်ထက်ကြီးသောဆေးခြောက်ပင်ကိုဆိုလိုသည်
၁၉ (၈) လက်မ၊ ၂၀ (၃၄)“ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း” ဆိုသည်မှာကုန်ကြမ်းများကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းမှထွက်သောမီးခိုးများကိုရှူရှိုက်မိခြင်းကိုဆိုလိုသည်
21 စက်ရုံပစ္စည်းတစ်ခုမီးလျှံအားဖြင့်လောင်ကျွမ်းသောအခါ, ၂၂ (၃၅)“ ပြည်နယ်လိုင်စင်အဖွဲ့” ဆိုသည်မှာအောက်ပါတို့မှတစ်ခုခုကိုဆိုသည် -
၂၃ (က) ကင်တပ်ကီဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ဘုတ်၊ ၂၄ (ခ) ကီသူနာပြုသူနာပြုဘုတ်၊
25 (36) "ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှု" သို့မဟုတ် "ဆေးခြောက်၏ဆေးဖက်ဝင်အသုံးပြုမှု" တို့ပါဝင်သည်
၀ ယ်ယူခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊
20 HB136 -6၏ UNOFFICIAL COPY 118 RS HB 013610.100 / GA စာမျက်နှာ 366 - XXXX GA
ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁ မှ ၃၀ အရ ၁ ခု။ အသုံးအနှုန်းများ "ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၏အသုံးပြုမှု
2 ဆေးခြောက် "နှင့်" ဆေးခြောက်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု "မပါဝင်ပါဘူး
၃ (က) ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူမှဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ၄ (ခ) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၊
၅ (၃၇)“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာထံလာခြင်း” ဆိုသည်မှာမှတ်ပုံတင်ထားသောသူကိုဆိုသည်
အခြားပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ နယ်မြေ၊ ဓနသဟာယ၊
10 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ထုတ်ပေးရေး၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုရန်; နှင့်
၁၁ (၃၈)“ စာဖြင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်” ဆိုသည်မှာလက်တွေ့လေ့ကျင့်သူမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာရွက်စာတမ်းကိုဆိုသည်။
12 ကြောင်း: 13 (က) Practitioner ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမြင်တွင်လူနာလက်ခံနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်အသုံးပြုခြင်းမှကုထုံးသို့မဟုတ် palliative အကျိုးခံစားခွင့် ၁၄ ခု၊
15 (ခ) အရည်အချင်းပြည့်မှီသောကျန်းမာရေးအခြေအနေသို့မဟုတ်၎င်းအတွက်အခြေအနေများကိုသတ်မှတ်သည်
16 လက်တွေ့လေ့ကျင့်သူကလူနာသည်ကုထုံး (သို့) နာတာရှည်ရောဂါရနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်
၁၇ အကျိုးကျေးဇူး၊ နှင့် (17) (ဂ) ၎င်းလေ့ကျင့်သူတွင်စိတ်ရင်းမှန်သူ - လူနာရှိကြောင်းအတည်ပြုသည်
လူနာနှင့် 19 ဆက်ဆံရေး
* Miggy at ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း